တရုတ်နိုင်ငံက တံခါးဖွင့်ဝါဒ ဆက်လက်ကျင့်သုံးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာကြီးအား အခွင့်အလမ်းများမျှဝေသွားမည်ဟု ဝန်ကြီးချုပ် လီပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်း၌ ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေသည်ကို အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ကွမ်ကျိုး၊ အောက်တိုဘာ ၁၅ ရက် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည် တံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးဖြင့် မောင်းနှင်နေခြင်းဖြစ်ပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ရရှိရန် နိုင်ငံ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းများကို ကမ္ဘာကြီးအား မျှဝေသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်က အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair ရှိ အမေရိကန် Honeywell စက်မှုလုပ်ငန်းပြခန်းတွင် ပြခန်းအကြီးအကဲနှင့် စကားပြောကြားနေသော ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်အား အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair ရှိ Ecovacs Robotics ပြခန်းအား ကြည့်ရှုနေသော ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်အား အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်တုန်းပြည်နယ် ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair ရှိ ဗြိတိန်နိုင်ငံ အခြေစိုက်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှ လုပ်ငန်းအကြောင်းရှင်းပြနေသည်ကို နားထောင်နေသော ဝန်ကြီးချုပ် လီခဲ့ချန်အား အောက်တိုဘာ ၁၄ ရက်က တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝန်ကြီးချုပ် လီသည် တရုတ်နိုင်ငံ တောင်ပိုင်း ကွမ်ကျိုးမြို့တွင် ပြုလုပ်သော ၁၃၀ ကြိမ်မြောက် တရုတ်နိုင်ငံ သွင်းကုန်နှင့် ပို့ကုန်ပြပွဲ သို့မဟုတ် Canton Fair ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမိန့်ခွန်း၌ အထက်ပါအတိုင်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ပီရူးနိုင်ငံ သမ္မတ Pedro Castillo ၊ ရုရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Mikhail Mishustin ၊ ဟန်ဂေရီနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Viktor Orban ၊ မလေးရှားနိုင်ငံ ဝန်ကြီးချုပ် Ismail Sabri Yaakob ၊ ကို့တ်ဒီဗွာနိုင်ငံ (Côte d’Ivoire) ဝန်ကြီးချုပ် Patrick Achi နှင့် ကုလသမဂ္ဂ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကွန်ဖရင့် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Rebeca Grynspan တို့လည်း ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်။
၁၉၅၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ခဲ့သော Canton Fair သည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုတွင် အရေးပါသော လက္ခဏာတစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ခဲ့သည်။ လာမည့်အစည်းအဝေး အော့ဖ်လိုင်းပြပွဲ (fair offline) တွင် ကုမ္ပဏီပေါင်း ၇,၈၀၀ ခန့် ပါဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အွန်လိုင်း (online) တွင်မူ ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပကုမ္ပဏီပေါင်း ၂၆,၀၀၀ ခန့် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
လွန်ခဲ့သည့် ၆၅ နှစ်အတွင်း Canton Fair သည် အနိမ့်အမြင့်ရှိခဲ့သော်လည်း ဘယ်သောအခါမှ ရပ်တန့်သွားခဲ့ခြင်းမရှိဘဲ အသိအမှတ်ပြုလောက်ဖွယ် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ကြောင်း လီက ပြောခဲ့သည်။
Canton Fair ပြပွဲသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ တံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအတွင်း ပေါင်းစည်းလာခြင်း၏ သမိုင်းကြောင်းဖြစ်သလို တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အခွင့်အလမ်းများမျှဝေခြင်းနှင့် အပြန်အလှန် အကျိုးကျေးဇူးပြုရာ နှစ်ဘက် အကျိုးအမြတ်ရှိသော ရလဒ်များ ရရှိနေသော ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏ သမိုင်းကြောင်းလည်း ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါ (COVID-19) တစ်ကျော့ပြန်ဖြစ်ပွားခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ အခြေအနေများနှင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိ နိုင်ငံများတွင် ကြီးမားသောအပြောင်းအလဲများ ရင်ဆိုင်နေရသော်ငြားလည်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် တံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့် ရိုးရှင်းမှု၌ ခလုတ်တံသင်းများအပြင် သည်းခံခြင်းနှင့် အားလုံးပါဝင်မှု၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များအား ကိုင်တွယ်ရန် ရဲရင့်မှုကို ပြသရမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဆိုသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံများအားလုံးအနေဖြင့် ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးတွင် အတူတကွဆောင်ရွက်ရန်၊ စီးပွားရေးနာလန်ထူမှု လွယ်ကူစေရန် တံခါးဖွင့်ဝါဒနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထိန်းသိမ်းရန် ဝန်ကြီးချုပ်က တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် နိုင်ငံတကာဝန်းကျင်နှင့် ကပ်ရောဂါကြောင့် မြောက်များစွာသော စိုးရိမ်မှုများနှင့် ယခုနှစ်အတွင်း ဆိုးရွားသောရေကြီးရေလျှံမှုများကြာင့် ရှုပ်ထွေး ကြမ်းတမ်းခြင်းနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပုံမှန်ကိုဗစ်-၁၉ ရောဂါတုံ့ပြန်ရေးထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက်နေစဉ်မှာပင် စိန်ခေါ်မှုများနှင့် အခက်အခဲများမှာ မြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် ဖြည်းဖြည်းချင်း ပြန်လည်နာလန်ထူလာခဲ့ပြီဖြစ်ကာ အဓိက စီးပွားရေးအညွှန်းများမှာလည် သင့်လျော်သော်အတိုင်းအတာအတွင်း လှုပ်ရှားနေကြောင်း လီက ဆိုသည်။
တစ်ချိန်တည်မှာပင် တရုတ်နိုင်ငံ စီးပွားရေး နာလန်ထူမှုသည် မတည်မငြိမ် မမျှတမှု ဖြစ်နေဆဲဖြစ်သလို အဆင်ပြေချောမွေ့သော စီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအား ထိန်းသိမ်းရာတွင် စိန်ခေါ်မှုများ မြင့်တက်လျက်ရှိကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအယူအဆသစ်တွင် ပြုမူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပုံစံအသစ်ဖော်ဆောင်မှု မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် အရည်အသွေးမြင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဖြည့်စွက်ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် သင့်တင့်သော အတိုင်းအတာဖြင့် စီးပွားရေးလည်ပတ်မှုကို ထိန်းသိမ်းကာ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးအပေါ် အာရုံစိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ် စီးပွားရေး၏ တည်ငြိမ်ပြီး ကာလရှည် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုလည်း မြှင့်တင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပြည်ပစီးပွားရေးနှင့် ကုန်သွယ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းစေရန် စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့် ဈေးကွက်အကျိုးကျေးဇူးများအပေါ် အမှီပြုသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဝန်ကြီးချုပ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
၎င်းက ဆက်၍ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်ရေးမူဝါဒများ အပြောင်းအလဲမရှိ တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းသွားမည်ဖြစ်သလို အရည်အသွေး ပိုမိုမြင့်မားသော ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ တင်သွင်းရန် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် e-commerce လုပ်ငန်း ပေါင်းစည်းရေးရှေ့ပြေးဇုန်များ အရေအတွက်အသစ်ကိုလည်း ယခုနှစ်မကုန်မီ ထူထောင်သွားမည်ဖြစ်ကာ ကွမ်တုန်းပြည်နယ်ရှိ မြို့များအားလုံး၌ အပြည့်အဝလွှမ်းခြုံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ကြေညာခဲ့သည်။
နိုင်ငံရပ်ခြား သိုလှောင်ရုံများကဲ့သို့ စီးပွားရေးပုံစံသစ်များ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အရှိန်မြှင့်တင်ခြင်းသွားမည် ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ပြည်ပ စမတ်ထောက်ပံ့သယ်ပို့ (smart logistics) ပလက်ဖောင်းများကိုလည်း မြှင့်တင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံသည် ကုန်သွယ်ရေး ဒီဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းမှုဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကွမ်တုန်း-ဟောင်ကောင်-မကာအို မဟာပင်လယ်အော်ဧရိယာနှင့် အခြားဧရိယာများ၌ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေး ဒီဂျစ်တယ်ကူးပြောင်းမှုအတွက် ရှေ့ပြေးဇုန်အုပ်စုများ ဖော်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးဝန်းကျင် ဖော်ဆောင်ရာတွင် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဈေးကွက်ဝင်ရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်မှုစာရင်း ထပ်မံလျှော့ချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ရှေ့ပြေး လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်မှုဇုန်များ၌ ကန့်သတ်မှုစာရင်း၌ ထုတ်ကုန်အမယ်များအား ဖယ်ရှားသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း လီက ပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် နိုင်ငံအဆင့်ဆောင်ရွက်မှု ထူထောင်အပြီး စံနှုန်းမြင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မှု စိတ်ချသေချာစေမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား အလယ်အလတ်နှင့် အရည်အသွေးမြင့် ထုတ်လုပ်မှု၊ ခေတ်မီဝန်ဆောင်မှုများ စသည့်နယ်ပယ်များနှင့် နိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းနှင့် အနောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု တိုးမြင့်လာရေးအတွက် ထောက်ပံ့မှုများ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝန်ကြီးချုပ် လီက ပြောကြားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလုပ်ငန်းများအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံ အမျိုးသား သိပ္ပံနှင့် နည်းပညာအစီအစဉ်၌ သုတေသနနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလုပ်ငန်းတွေနဲ့ စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ဖို့ တွန်းအားပေးပါတယ်” ဟု ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဥပဒေကို လေးလေးနက်နက် ဆက်လက် အကောင်အထည်ဖော်သွားမည် ဖြစ်သလို စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ပံ့ပိုးရေး၊ အသိဉာဏ်ပစ္စည်းပိုင်ဆိုင်မှု ချိုးဖောက်ခြင်းများအား မဆုတ်မနစ် တိုက်ဖျက်ရေး၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ ပြည်တွင်းရော ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအားလုံးကို ထိန်းသိမ်းရေး ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သလို သာတူညီမျှစွာ ပြုမူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီကပြောကြားခဲ့သည်။
နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့် ကုန်သွယ်ရေးစည်းများအပေါ်တွင်လည်း တရုတ်နိုင်ငံက WTO စည်းမျဉ်းများနှင့် ကိုက်ညီသော ဒေသဆိုင်ရာ လွတ်လပ်သော ကုန်သွယ်ရေးအစီအစဉ်များအားလုံးကို ပွင့်လင်းစွာ ကြိုဆိုလျက်ရှိကြောင်း လီက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ဒေသတွင်း ဘက်စုံစီးပွားရေးမိတ်ဖက်ဆောင်ရွက်မှု (RCEP) ဆောလျဉ်စွာ အသက်ဝင်လာရေးနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး၊ ပစိဖိတ်ဖြတ်ကျော် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံမှု ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး သဘောတူညီချက် (CPTPP) တွင် ချိတ်ဆက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ် တက်ကြွစွာမြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆက်စပ်သောနိုင်ငံများအားလုံးနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် စံချိန်မီ လွတ်လပ်သောကုန်သွယ်ရေး သဘောတူညီချက်များနှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဒီဂျစ်တယ်နှင့် အစိမ်းရောင် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကဲ့သို့သော ပေါ်ထွန်းလာသည့်နယ်ပယ်များ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားကောင်းရေး လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း လီက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးနှင့် တံခါးဖွင့်ဝါဒသည် တရုတ်နိုင်ငံ၏ အခြေခံအမျိုးသားမူဝါဒဖြစ်သလို နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ အခြေခံအင်အားလည်းဖြစ်ကြောင်း လီက အလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံရပ်ခြား ခေါင်းဆောင်များကလည်း နိုင်ငံတကာ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး မြှင့်တင်ရေးနှင့် ကပ်ရောဂါကာလအလွန် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး ပြန်လည်နာလန်ထူမှု လွယ်ကူချောမွေ့စေရေး၌ Canton Fair ၏ အခန်းကဏ္ဍကို ချီးကျူးပြောကြားခဲ့ကြသည်။
အဆိုပါ ခေါင်းဆောင်များက တရုတ်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အလားအလာများတွင် ၎င်းတို့၏ စိတ်ချယုံကြည်မှုကို ပြောကြားခဲ့ကြပြီး ၎င်းတို့အနေဖြင့်လည်း ၎င်းတို့နိုင်ငံအသီးသီးမှ ကုမ္ပဏီများကို တရုတ်နိုင်ငံ၌ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု ချဲ့ထွင်ရန်နှင့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပိုမိုမျှဝေရန်နှင့် အာရှ-ပစိဖိတ်ဒေသနှင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားရေး နာလန်ထူရေးတွင် အားအင်သစ်ဖြည့်တင်းရန် တွန်းအားပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားပြီးနောက် ဝန်ကြီးချုပ် လီသည် ပြည်တွင်း၊ ပြည်ပပြခန်း ခင်းကျင်းထားမှုများကို ကြည့်ရှုခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အနှစ်ချုပ်များကို နားထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-10-15 01:32:25|Editor: huaxia
GUANGZHOU, Oct. 14 (Xinhua) — Chinese Premier Li Keqiang said on Thursday that China’s development is propelled by opening-up and reform, and China will share its development opportunities with the world to achieve better development.
Li made the remarks when deliveringaspeech at the opening ceremony of the 130th session of the China Import and Export Fair, or Canton Fair, in China’s southern city of Guangzhou.
Founded in 1957, the Canton Fair is seen asasignificant barometer of China’s foreign trade. During the coming session, around 7,800 companies will participate in the fair offline, while around 26,000 companies from home and abroad will participate online.
He said the history of the Canton Fair isahistory of China’s opening-up and integration into the world economy, and alsoahistory of enterprises from all over the world sharing China’s development opportunities and achieving mutual benefit and win-win results.
On optimizing China’s business environment, Li said China will further shorten the negative lists on the market access of foreign investment, zero out the manufacturing items on the negative list in pilot free trade zones.
“Foreign-invested firms are encouraged to undertake commissioned research and development business and projects in China’s National Science and Technology Plan,” he added.
Li underlined that reform and opening-up is China’s basic national policy as well as the fundamental power that propels China’s development, now and into the future.
Foreign leaders spoke highly of the Canton Fair’s role in promoting international trade and investment cooperation, and facilitating the global economic recovery in the post-pandemic era.
They expressed their confidence in China’s economic development prospects and said that they will encourage companies from their countries to expand cooperation in China to better share China’s development opportunities and inject new energy into the Asia-Pacific region and the global economic recovery.
After the opening ceremony, Li inspected some domestic and foreign exhibition pavilions and listened to their briefings on businesses. Enditem
1-3-Chinese Premier Li Keqiang deliversaspeech at the opening ceremony of the 130th Session of the China Import and Export Fair, or Canton Fair, in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 14, 2021. (Xinhua/Pang Xinglei)
4- Chinese Premier Li Keqiang talks withahead of the U.S. industrial conglomerate Honeywell at the pavilion of Honeywell on the 130th Session of the China Import and Export Fair, or Canton Fair, in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 14, 2021. Li inspected some domestic and foreign exhibition pavilions and listened to their briefings on businesses after attending the opening ceremony of the Canton Fair. (Xinhua/Pang Xinglei)
5- Chinese Premier Li Keqiang inspects the pavilion of China’s leading service robot producer Ecovacs Robotics on the 130th Session of the China Import and Export Fair, or Canton Fair, in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 14, 2021. Li inspected some domestic and foreign exhibition pavilions and listened to their briefings on businesses after attending the opening ceremony of the Canton Fair. (Xinhua/Pang Xinglei)
6- Chinese Premier Li Keqiang listens to the briefing on business from an expatriate employee based in Britain via video link at the pavilion of Fujian Zongteng Network Co., Ltd. on the 130th Session of the China Import and Export Fair, or Canton Fair, in Guangzhou, south China’s Guangdong Province, Oct. 14, 2021. Li inspected some domestic and foreign exhibition pavilions and listened to their briefings on businesses after attending the opening ceremony of the Canton Fair. (Xinhua/Zhai Jianlan)